Dowlada Turkiga oo bil walba siineysa dowlada Soomaaliya 2 Malyan oo Dollar | Sagal Radio Services
Wargeyska Rasmiga ee dowlada Turkiga ayaa maanta oo Talaada ah warkan shaaciyay wuxuuna cadeeyay in lacagahan kaalmada ah lagu kabayo misaaniyada dowlada Somaliya iyo adeegyada hay’adaheeda, iyadoo loo siinayaa Somaaliya si qeyb qeyb ah.
Sida laga warqabo waxaa Todobaadkan dekeda magaalada Muqdisho ku soo xirtay markab Turkiga leeyahay oo sida gargaar bani’aadanimo oo lagu qiimayay $8 milyan looguna tala galay dadka Soomaaliyeed ee wax yeelada ka soo gaartay daadadka iyo abaartii dalka ku dhufatay.
Warkan ka soo baxay dalka Turkiga ayaa ku soo beegmaya maalmo kahor xilli lagu wado in uu markii saddexaad soo booqdo Soomaaliya Madaxweynaha Turkiga Erdogan.
Hase yeeshee dowlada Soomaaliya iyo dowlada Turkiga ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin booqashada Madaxweyne Erdogan ee magaalada Muqdisho.
Tags deeqay lacaga oo Somalia Turkiga ugu